Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, February 27, 2010 Saturday, February 27, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာလေး တစ်ခုပြချင်လို့ပါ..
ပုံလေးက ကားတစ်စီးနဲ့ တူတယ်….. ဒါပေမဲ့ သေချာကြည့်ထားနော်..
ဒါလေးက အဲဒီကားလေးနဲ့သူ့ကို ထည့်ထားတဲ့ ဘူးလေးပါ..
မသိရင် မားစီးဒီဒီးစ် ကားတစ်စီးပါဘဲ
တကယ်တမ်းတော့ ဒီကားလေးက ဖုန်းတစ်လုံးပါ.. ဒါလေးက ဖုန်းရဲ့ အတွင်းဘက် ဘက်ထရီ ဖြုတ်ထားတဲ့ မြင်ကွင်းပါ…. SIM CARD ၂ခု ထည့်လို့ရပါတယ်…
ဘက်ထရီထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီလိုလေး ပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်…
ကဲ.. အဲဒီကားလေးကို ပက်လက်လေး လှန်လိုက်ရင် Screen နဲ့ Key Pad တွေကို တွေ့ရပါပြီ…
ဒါကတော့ အဲဒီဖုန်းနဲ့ သူ့ Accessories တွေပေါ့နော်….
ကဲ.. ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနဲ့ ဖုန်းလေး လိုချင်ကြတယ်ဆိုရင် အမှာစာ လက်ခံ နေပါပြီနော်… :) :) :)
Soure from Funzug.com
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, February 24, 2010 Wednesday, February 24, 2010 Labels: ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟာသများ
အသက် ၇၂ နှစ်အရွယ် အဖိုးအို တစ်ဦးဟာ သူရဲ့ လှေပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး ငါးမျှားနေပါတယ်.. အဲဒီချိန်လေးမှာ အသံလေးတစ်သံကို သူက ကြားလိုက်ရတယ်.. “ကယ်ပါဦး ကယ်ပါဦး ” ဆိုတဲ့ အသံလေး သေးသေးလေး….
အဖိုးအိုဟာ သူ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်ရှာပေမဲ့ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မတွေ့တော့ အိပ်မက် မက်နေတယ်လို့တောင် သူက ထင်လိုက်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ “ကယ်ပါဦး ” ဆိုတဲ့ အသံကိုဘဲ သူက ထပ်ထပ် ကြားလိုက်ရပြန်တယ်.. ဒါနဲ့ သေသေချာချာ လိုက်ရှာကြည့်တော့မှ ရေထဲက ကြာရွက် တစ်ရွက်ပေါ်မှာ ဖားကလေးတစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်ပါတယ်…
“မင်းက ငါ့ကို စကားပြောနေတာလား ” လို့ အဖိုးအိုက ဖားကလေးကို မေးလိုက်ပါတယ်..
“ဟုတ်ပါတယ်.. ရှင့်ကိုပြောနေတာပါ.. ကျွန်မကို ကယ်ပါ.. ဒီကြာရွက်ပေါ်ကနေ ဆယ်ယူပြီး ရှင်က ကျွန်မကို အနမ်းလေးတစ်ပွင့် ပေးလိုက်ပါ… ဒါဆိုရင် ကျွန်မဟာ ရှင်မြင်ဖူးသမျှ မိန်းမပျိုတွေထဲမှာမှ အလှဆုံး မိန်းခလေးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်.. ပြီးရင် ကျွန်မဟာ ရှင့်ရဲ့ သတို့သမီးလေး ဖြစ်လာမှာပါ…. ဒါဆိုရင် ရှင့်သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေက ရှင့်ကို မနာလိုရလောက်အောင် ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်..”
အဖိုးအိုဟာ ဖားကလေးရဲ့ စကားကို ကြားတာနဲ့ ချက်ခြင်းဘဲ ဖားကလေးကို ကောက်ပြီး သူရဲ့ အင်္ကျီအိတ်ထောင်ထဲကို ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်…
ဖားကလေးက “ ရှင်ရူးနေသလား.. ကျွန်မပြောတာကို ရှင်မကြားဘူးလား.. ကျွန်မကို နမ်းလိုက်ရင် ရှင့်ရဲ့ အလှပဆုံး သတို့သမီးလေး ဖြစ်လာမှာပါလို့ ပြောနေတယ်လေ……….”
အဖိုးကြီးက အိတ်ထောင်လေးကို အသာဟပြီး ဖားကလေးကို ငုံ့ကြည့်ကာပြောလိုက်ပါတယ်.
“ နေပါစေ… ငါ့အသက်အရွယ်က မိန်းမတစ်ယောက် ရှိတာထက် စကားပြောတတ်တဲ့ ဖားတစ်ကောင် ရှိတာက ပိုပြီးကောင်းလိမ့်မယ်တဲ့…………………” :)
ဒီရက်ပိုင်း ဘလောဂ့်က ၀င်မရဘဲ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် စိတ်တွေ နည်းနည်း တင်းကြပ် နေပါတယ်.. ဒါကြောင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးစရာလေး ရှာကြံရေးလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်မရဲ့ ခင်မင်လှစွာသော စာရေးဖော် ဘလောဂ်ဂါ ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းများ.. စာလာဖတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးများ အဖိုးအိုနေရာမှာသာ ဆိုခဲ့ရင် ဖားကလေးကို နမ်းမှာလား… သိချင်စမ်းလှပါတယ်.. :) :) :) မိန်းခလေးတွေကတော့ ပွဲကြည့်ပရိသတ် လုပ်ကြစို့ရဲ့... :)
source from Funzug.com မှ The Talking Frog ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, February 21, 2010 Sunday, February 21, 2010 Labels: ဆောင်းပါး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို စတိုင်ကျနတဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် ဘယ်လို အချက်လေးတွေကို လိုက်နာ သင့်တယ်၊ ဂရုတစိုက်ရှိသင့်တယ် ဆိုတာလေးတွေကို သိသလောက်၊ ဖတ်မှတ်ထားသလောက်၊ လက်လှမ်းမီသလောက် ရှာဖွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
၁။ အ၀တ်အစား ၀တ်ဆင်ရာမှာ စတိုင်ကျပါတယ် ဆိုတဲ့သူ တော်တော်များများဟာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့ အကျင့်ကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်.. အရေးတကြီး ချိန်းဆိုမှု၊ ညစာစားပွဲ၊ အစည်းအဝေး၊ အင်တာဗျူး၊ ဧည့်ခံပွဲ စသည်တို့အတွက် အ၀တ်အစားများကို သွားမဲ့ရက် မတိုင်မီကတည်းက ကြိုတင် ရွေးချယ်ထားသင့်ပါတယ်.. သွားခါနီး ကပ်ပြီးမှ ပြင်ဆင်ရွေးချယ်တဲ့အခါ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ ကြယ်သီး၊ ဇစ် ပြုတ်နေတာတို့၊ မီးပူတိုက်ဖို့ အချိန်မရလိုက်တာတို့ စသဖြင့် အခက်အခဲများကို ရှောင်လွှဲပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
၂။ မိမိနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိမဲ့ အ၀တ်အစားကို ရွေးချယ်တတ်ပါစေ.. စူးရဲတောက်ပလွန်းသော အရောင်များ၊ ကြောင်ကြောင်ကြားကြားဒီဇိုင်းများ၊ တို့လို့တန်းလန်း အ၀တ်အစားများသည် သင်၏ စတိုင်ကျနမှုကို ဖျက်ဆီးစေသော အဆိုးဝါးဆုံး အချက်များပင်ဖြစ်ပါတယ်.. အ၀တ်နဲ့ လိုက်ဖက်သော ဖိနပ်၊ ရှူး၊ လည်စည်း၊ ခါးပတ် စသည်များကို ဆောင်ထားပါ။ သင့်တော်သည့် နေရာ၊ ပွဲလမ်းများတွင် ၀တ်ဆင်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်.. ဖိနပ်များကို သပ်ရပ် သန့်ရှင်းနေရန် ဂရုစိုက်ပါ… ရှူးဖိနပ်ကို ပေါလစ် တိုက်ရန် မမေ့ပါနဲ့…
၃။ သင့်တော်တဲ့ ဘော်ဒီစပရေး၊ ရေမွှေး၊ Roll On ကို ရွေးချယ်သုံးစွဲပါ။ ယောက်ျားလေးမို့ အမွှေးနံ့သာ မသုံးစွဲရဘူး ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ နှစ်တစ်ထောင် အကွာအဝေးမှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ.. ခေတ်မှီသူတိုင်း၊ မိမိကိုယ်ကို စတိုင်ကျချင်သူတိုင်း ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်မဲ့ မွှေးရနံ့ တစ်ခုခုကို သုံးစွဲတတ်ကြပါတယ်.. မွှေးရနံ့ တစ်ခုကို သုံးစွဲခြင်းဟာ လူတွေကြားထဲမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိစေပါတယ်.. ယောက်ျားလေးများနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ရေမွှေးရနံ့မှာ အများအားဖြင့် သစ်သားရနံ့၊ သစ်သီးနံ့၊ ပရုပ်နံ့၊ အရှေ့တိုင်း အမွှေးအကြိုင်များ စသည်တို့နဲ့ ဖော်စပ်ထားတဲ့ မွှေးရနံ့များနဲ့ ပိုမို သင့်တော်ပါတယ်.. တရားလွန် မွှေးကြိုင်နေသော အမွှေးရနံ့ မျိုးကိုတော့ ရှောင်ကျဉ် သင့်ပါတယ်.. စတိုင်ကျခြင်းထက် ကျော်လွန်ပြီး လူတကာ နှာခေါင်းရှုံ့စရာဖြစ်နိုင်လို့ပါ….
၄။ မိမိသွားလာမဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်နဲ့ သင့်တော်လျှောက်ပတ်သော ၊ မိမိအသက်အရွယ်နှင့် လိုက်ဖက်သော အ၀တ် အစားကို ရွေးချယ်တတ်ပါစေ.. ဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်သည်အများအပြား ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်ခံပွဲများ၊ မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားမျိုး တက်ရောက်ရန်အတွက် ရပ်ပ်ပါစတိုင်၊ ပန့်စတိုင် စသည်ဖြင့် ၀တ်စားဆင်ယင် သွားမည်ဆိုလျှင် စတိုင်ကျသူတစ်ယောက်ထက် လူရယ်ဖို့သာ ဖြစ်နိုင်သဖြင့် လိုက်ဖက်သော ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုကို ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ပါ..
၅။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို စတိုင်ကျနစေဖို့ အကြောင်းအချက်တွေထဲမှာ လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံ ရွေးချယ်မှုဟာလည်း အရေးပါပါတယ်.. ဆံပင်ပုံစံကြောင့် ရုပ်ရည်ပါ ပြောင်းလဲ သွားနိုင်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကြုံရာ ဆိုင်မှာ ဆံပင်ကို ညှပ်ခြင်းထက် မိမိ ညှပ်နေကျ၊ မိမိနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ပေးမဲ့ ဆိုင်မျိုးမှာသာ ဆံပင်ကို ပုံမှန် ညှပ်သင့်ပါတယ်..
၆။ ကျန်းမာရေး လေ့လာလိုက်စားပါ.. မိမိ အားလပ်ချိန်တွင် ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုကို မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်.. များများ အချိန်မပေးနိုင်လျှင်တောင်မှ ရေချိုးခါနီး နာရီဝက်လောက် အချိန်ယူ၍ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေရန် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်သည့် အကျင့်ကို မွေးမြူပါ…
၇။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ နေထိုင်ပါ.. သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုသည်လည်း အမျိုးသားများကို စတိုင်ကျနစေသော အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်.. မိမိခြေသည်း၊ လက်သည်းများ ခြေးညှော် ကင်းရှင်းစေရန် အစဉ်သတိပြုပါ.. မုတ်ဆိတ်မွှေး၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးများ ရိတ်ပြီးတိုင်း after shave ကို သုံးစွဲပါ.. ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း မျက်နှာသစ်ပြီး သင့်တော်သော Moisturizer ကို လိမ်းပြီးမှ အိပ်ရာဝင်ပါ...
၈။ ဆွဲကြိုး၊ လက်စွပ်၊ ဟန်းချိန်း အစရှိသော ရှိသမျှ အဆင်တန်ဆာများ ထုတ်၍ ဆင်မြန်းထားခြင်းသည် စတိုင်ရှိခြင်းထက် အများအမြင်တွင် ယောက်ျားမဆန်ဘဲ အကြွားပိုခြင်းဟုသာ အထင်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်… နာရီကောင်း တစ်လုံးသည် ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက် မရှိမဖြစ်သော အဆင်တန်ဆာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်.. အချိန်တန်ဖိုးထားတတ်သူ၊ တိကျသူ စသည့် အင်္ဂါရပ်များကို ပေါ်လွင်စေနိုင်ပါတယ်..
၉။ ကိုယ်နှင့် အဆမတန် သေးငယ်သော၊ သို့မဟုတ် ကြီးလွန်းသော အ၀တ်အစားများကို ရှောင်ပါ.. ခေတ်အလွန်ဆန်လွန်းသော အ၀တ်အစားများကိုလည်း ရှောင်သင့်ပါတယ်.. ခေတ်ဆန်လွန်းသော အ၀တ်အစားများသည် အလျှင်အမြန် ခေတ်ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်..
၁၀။ စကားပြော ရည်မွန်ခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဗဟုသုတပြည့်စုံခြင်း၊ လူအများနှင့် သဟဇာတဖြစ်ခြင်း စသည့် အချက်များသည်လည်း ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို တောက်ပ စတိုင်ကျစေသော အချက်များ ဖြစ်ပါတယ်…
အမျိုးသားတွေ အတွက်လဲ ရေးပါဦးလို့ ဆိုလာတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဒီ ဆောင်းပါးလေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်.... အားလုံး စတိုင်ကျကျနဲ့ လှပနိုင်ကြပါစေနော်..